GNOME 3.30 "Almeria" dia efa navotsotra tamin'ny fomba ofisialy | Avy amin'ny Linux
GNOME 3.30 "Almeria" dia efa navotsotra tamin'ny fomba ofisialy
Rehefa afaka enim-bolana ny fampandrosoana, Navoaka ny gnome desktop 3.30. Ankoatra ny zavatra hafa, mManatsara ny fahombiazan'ny birao sy ny fizarana lamba. Ho fanampin'ireo fiasa vaovao, misy ny fanamboarana bibikely sy fanatsarana kely.
Gnome 3.30 dia manana ny kaody code of «Almería», ary ny kaonferansa Guadec tamin'ity taona ity dia natao tao an-tanàna mitondra io anarana io ihany.
Anisan'ireo fanavaozana ny fampiroboroboana ny fahombiazan'ny birao: mampiasa loharanom-pahalalana vitsy kokoa ny Gnome ankehitriny, ahafahana mihazakazaka fampiharana bebe kokoa miaraka amin'ny tsy fandavana ny zava-bita.
Mora kokoa ny mizaha ny fizarana efijery sy ny seha-birao lavitra. Ny menan'ny rafitra dia mampiseho mpanondro rehefa mavitrika ireo fivoriana mazoto, mamela ny mpampiasa hamarana haingana ny fotoana iray.
1 Gnome 3.30 Endri-javatra
1.1 Fanohanana tsara kokoa ho an'ny Flatpak
1.2 Ny Gnome 3.30 dia misy emulator lalao vaovao
Gnome 3.30 Endri-javatra
Boaty, Ny fampiharana Gnome VM dia mifandray amin'ny mpizara Windows lavitra amin'ny alàlan'ny protokol RDP, izay manamora ny fitantananany.
Ankoatra izany, Ny boaty izao dia manafatra milina virtoaly amin'ny endrika OVA ihany koa, izay manamora ny fizarana milina virtoaly.
Ho fanampin'izay, misy fanavaozana kely kokoa. Miaraka amin'ny podcast, Gnome dia manana fampiharana podcast vaovao eo an-tsambo.
Misaotra azy ireo fa tsy ny podcast ihany no azo alefa sy milalao, fa azo atao koa ny manafatra tsotra.
Fanohanana tsara kokoa ho an'ny Flatpak
Gnome 3.30 dia manohana ny endrika fonosana Flatpak vaovao ihany koa. Afaka manavao avy hatrany ny Flatpaks ny mpitantana rindrambaiko.
Fampiharana vaovao maro no efa misy amin'ny alàlan'ny Flathub, trano fisakafoanana Flatpak. Raha hampiasa ilay fiasa dia tsy maintsy ampidirin'ny mpampiasa safidy mifanentana ao amin'ilay rindrambaiko.
Ny navigateur anatiny an'i Gnome dia manamora ny fijerena atiny, satria manohana fomba fijery famakiana kely farafahakeliny ao anaty tranokala.
Ny fijerena famakiana dia misy ihany koa ho an'ny Firefox, ohatra, ny lahatsoratra dia miseho tsy misy ny menus sy ny atiny hafa manodidina azy ary tsy misy sary.
Raha mbola manohana an'io endri-javatra io ny pejin-tranonkala, dia afaka mifamadika amin'ny tranonkala ny mpampiasa eo anelanelan'ny fomba fijery mahazatra sy ny fijery kely famakiana.
Ny Gnome 3.30 dia misy emulator lalao vaovao
ny Nanadio ny lisitry ny toerana sy mikaroka ao anaty tranokalan'ny rakitra ihany koa ireo mpandraharaha Gnome, Fitaovana Thunderbolt dia azo tanterahina ao anaty sehatra, miaraka amin'izay ihany no misy ny fitaovana mandeha rehefa nahita izany ny rafitra.
ny mora kokoa ny mifantina avatar, Notes, ny fampiharana Notes, dia mora ampiasaina. Farany fa tsy ny farany, ny kapila Veracrypt dia afaka mametaka sy manafoana ny volavolan-dalàna miafina.
Ny fizarana dia manome fonosam-birao efa niorina mialoha, izay raisin'ny mpampiasa ho azy miaraka amina kinova vaovao amin'ny fizarana.
Ny rindrambaiko lalao Retro izao dia haingana kokoa ampiasaina satria afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny alavitra ianao. Ny fanatsarana fanampiny dia misy:
Ny keymap dia azo alamina ho an'ny fidiran'ny mpanara-maso, satria rehefa tsy anananao ny mpanara-maso misy.
Haingana kokoa ny fitadiavana lalao satria ny angona fanampiny momba ny lalao tsirairay dia aseho amin'ny fijerin'ny fanangonana.
Ny kinova Flatpak dia misy emulator 4, ahafahanao milalao lalao bebe kokoa noho ny hatramin'izay.
ihany koa ny kinova birao vaovao dia azo apetraka aorian'ny alàlan'ny tahiry ivelany. Raha te-hanangona Gnome ny tenanao ianao dia tadiavo ilay rindrambaiko ao amin'ny toerana fitahirizana Gitlab.
Toy ny mahazatra dia misy fanatsarana kely maro hafa amin'ity kinova GNOME ity. Ireto ny sasany amin'izy ireo:
Records, Ny File Explorer an'ny GNOME dia ahitana bara fikarohana sy toerana tokana hanampiana anao hahita haingana kokoa ny rakitrao.
Ny Wizard fanomanana voalohany dia manana sehatr'asa fifantina avatar nohatsaraina, mampiseho ny sary avatar vaovao.
Araka ny efa nampoizina, Ny famoahana ny tontolon'ny birao GNOME 3.30 dia mitondra fiasa vaovao maro hafa sy fanatsarana ho an'ireo mpamorona fampiharana.
Na izany aza, matetika dia maharitra tapa-bolana vao misy kinova GNOME vaovao lehibe vao tafapetraka ao amin'ireo trano fivarotana lozisialy sasany amin'ireo fizarana GNU / Linux malaza indrindra.
Ny hany mila ataonao dia ny miandry ny mahita ny fonosana GNOME 3.30.0 ao amin'ny trano fitehirizam-bokin'ny fizarana Linux tianao indrindra amin'ny tapaky ny volana septambra na amin'ny faran'ny volana.
Aorian'izany, ny kinova GNOME 3.32 manaraka dia kasaina ho tonga amin'ny volana martsa 2019.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » GNOME 3.30 "Almeria" dia efa navotsotra tamin'ny fomba ofisialy
ruisu dia hoy izy:
izay ppa hametraka azy
Mamaly an'i ruisu
Tsy ny zava-drehetra dia apetraka amin'ny ppa, manandrama misintona ny rakitra apetraka ary manomboka fivoriana vaovao, mazava ho azy fa tsy maintsy manana "gnome-session" ianao.
Ny Arch Linux ISO voalohany miaraka amin'ny Linux Kernel 4.18 dia eto